Qoob-ka-ka-abuurka ah ee basbaas ee dhulka u furan | February 2020
Ugu Weyn Ee Qoob-ka-ka-abuurka ah ee basbaas ee dhulka u furan
Basbaas - waa mid ka mid ah dalagyada khudradda, kuwaas oo ku jira fara badan oo fitamiino waxtar leh. Dhaqanka waxaa iska leh Solanaceae genus. In xaaladaha sii kordhaya, basbaas waa warshad sanadle ah. Tallaabooyinka Agrotechnical ee loogu talagalay basbaas waa wax yar ka fudud yaanyada, maxaa yeelay maahan lagama maarmaan in la kiciyo. Warshadda waxaa lagu beeray ujeedooyin kala duwan oo culimaa oo aan kaliya ahayn.
Pepper "Claudio F1", oo tilmaamaya dhammaan dadka jecel Beelaha hore u bislaaday, ayaa si firfircoon loogu koray dalkeenna. Tani noocyo kala duwan oo ah basbaas macaan ayaa caan ku ah beeralayda qibrad leh. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa noocyada kala duwan. Qeex fasalka "Claudio F1" - Baasaboorka Bulgarian, macaan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Qoob-ka-ka-abuurka ah ee basbaas ee dhulka u furan 2020